Kufsiga Maxay ka tiri diinta Islaamku? – Kaasho Maanka
Kufsigu waa nooc kamida xad-gudubyada badan ee dhinaca galmada, waana fara-xumayn lagula kaco qof (badanaa dheddig) aan rabin ama raalli ka ahayn iyadoo la adeegsanayo xoog ama xeelad. Qofkasta oo lagu khasbo inuu sameeyo ama lagu sameeyo fal galmo la xidhiidha isagoo aan raali ka ahayn waa kufsi ha ahaado qofkaasi xaaskaaga/ninkaaga, saaxiibadda ama gabadh bannaankeedaa maraysa.
Waxa kale oo kufsi noqonaya galmo kasta oo loo/lala galmoodo qof aan garaadkiisu ku filnayn da’ ahaan ama maskax ahaan amaba qofka qaab khiyaano ku jirto loogu galmooday sida in qof kale la isaga dhigo.
Denbiga kufsigu waa mid la kowsaday jiritaanka dadka, bulsho kastaana waxay lahayd xeer-ciqaabeed gaar ah oo lagu edbiyo dadka falalkan ku kaca. Marka laga hadlayo kufsiga iyo diinta Islaamka waxaa kuu soo baxaysa inaan denbigaasi diinta meelna kaga jirin oo aanu lahayn xukun sharciyeed lagu ciqaabayo qofka falkaa foosha xun geysta. Diinta islaamku waxay qodob sharci kasoo saartay ciddii isu galmoota iyaga oo aan is qabin (Zino), Sinadu waa galmo ay raalli ka yihiin labada dhinac. Islaamku qofka Sinada ku kaca waxuu u kala qaybiyaa mid guur hore soo maray iyo mid aan soo marin, mid walbana ciqaab adag ayuu u jideeyey. Sinadu kufsi maaha, xeer gaar ah oo kufsigu leeyahay kuma jiro diinta Islaamka, hadaba maxay tahay sababtu? Carabtu waxay ahayd weligeedba bulsho aan qaderin badan u hayn haweenka, waxaase dhacday Maxammed markii uu sheegtay in Ilaah samada deggan soo diray uu bilaabay inuu xeerarka uu la yimid ku faafiyo awood ciidan. Marka dagaal ay qaadaan ciidanka Maxammed ee ay ku guulaystaan waxay si arxan daran saf uga geli jireen (kufsan jireen) xaasaska iyo gabdhaha ay dhaleen ragga cadawga ah ee ay jabiyeen, kufsi iyo addoonsi bay isugu dari jireen, nebiguna xalaalayn mooye inuu xarrimo oo ka dhiidhiyo waa ka gaabsaday. Waxaa jirtay in waqtigii Maxamed nin la odhan jiray Cabdullaahi Bin Saluul uu ku khasbi jiray addoomo uu lahaa dhillaysi iyaga oo aan raali ka ahayn si uu dhaqaale uga soo xareeyo, ilaaha Quraanka isaga oo arrintaa kahadlaya waxa uu yoro; (Ha ku khasbina addoomihiinna(dhedig) dhillaysiga haddii ay rabaan dhawrsanaan idinka oo doonaya sidka nolosha adduunyada, ciddii qasabta qasabkaas kadib eebbe waa danbi dhaafe naxariista – وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) Al-Nuur 33. Sida ka muuqata aayaddan Ilaahay wuxuu ballan qaadaya inuu u danbi dhaafi doono gabdhaha la khasbay ee aan iyagu doonitaankooda falkan ku samayn, balse danbiilaha falkan ku kacay wuu iska indho-tiray oo wax ganaax ah uma jidayn. Diinta islaamku kufsiga way xalaaleysay, cidda la kufsanayana waxay ka qaaddey karaamadii dadnimo waxayna ugu bedeleen addoonsi. Diinta islaamku waxay ugu yeedhay haweenkan la kufsanayo (Kuwa ay midigtaadu hanatay – ملك اليمين) ama (جارية). Waxaa dhacday mid kamida duullaanadii uu Maxammed qaaday in saxaabadiisii qaar badan oo kamida ay ka soo istaageen ama ka laba-labeeyeen inay kufsadaan dumarka la qabo balse Maxammed ayaa kaarka cagaaran siiyay si ayna dumarkaas ugu jixin-jixin, sidaas ayayna ku qafaasheen oo kufsi ugu bilaabeen.
QORMO LA XIRIIRTA: Diinta Islaamku ma ilaalisay xuquuqda haweenka?
Diinta islaamku waxay xalaaleysay oo fasaxday kufsiga, nebiga laftiisu wuxuu kufsaday haween badan, waxaa jirey qaar uu caruurnimo ku guursadey iyo kuwo uu ehelkooda iyo raggoodiiba diley kadibna addoon ahaan u kaxaystay. Gabadha yar ee 9 sannadood jirta guurka la guursdaa waa guur noocee ah? Maxay galmo ka taqaan? Qofta (Safiyah) ninkeedii iyo ehelkeeda oo dhan horteeda lagu gawracay iyadana la addoonsaday welibana isla habeenkiina loo galmooday ma guurbaad ku tilmaami kartaa mise waa kufsi cad? Dagaal oogayaashii (Mujaahidiintii) diinta islaamka dacallada adduunka gaadhsiiyey waxay ummado badan isugu dareen xasuuq, kufsi, dhac iyo addoonsi, muhiimad wayn bay u lahayd nebiga inuu ka shaqeeyo kana fekero baahida galmo ee ay qabaan mujaahidiintu sidaa darteed waa u banneeyey nooc walba oo dhillaysiya sida guurka loo yaqaan Mutcada iyo kufsiga haweenka gaalada xittaa haddii la qabo. Illaah hadduu jiro ma banneeyeen in haween iyo caruur la kufsado mana ogolaadeen in diintiisa dadka lagu qasbo. Xeerka ciqaabta Soomaaliyeed (legislative decree No. 5 1962) wuxuu xarrimaya kufsiga. waxaa ku xusan qodobka 398-aad farqadiisa (1)
Cidkasta oo adeegsata cunfi ama ku hanjabta adeegsiga awood iyadoo uga dan leh inay ugu galmooto qof jinsiga kale ah waa in lagu ciqaabaa shan ilaa shan iyo toban sannadood oo xadhiga ah. Ciqaabtan mid la mid ayaa lagu ciqaabayaa cid kasta oo u galmoota qof aan bixin karin raalli ahaansho ama cid kasta oo qof ugu galmoota qaab khiyaano ah iyadoo iska dhigaysa cid aanay ahayn.
Illaahay ma waxaa ka caqli batay dadkuu isagu abuurtay? Xeerkii iyo kitaabkii Ilaahay ma waxaa ka wanaagsan ka dad sameega ah? Waxa ka muuqata qodobka sare ku xusan in sharci-yaqaanada Soomaaliyeed ku guulaysteen waxay ku fashilmeen Illaaha Quraanka iyo nebigiisuba? Qodobka sharci ee ku xusan xagga sare wuxuu xaaraantimaynayaa in loo galmoodo qof la khasbay ama loogu hanjaby in awood loo adeegsan doono ama loo adeegsado awood iyo gacan ka hadal, wuxuu kale oo qodobkaa sharci mamnuucayaa in loo galmoodo qof aan raali ahaansho bixin karin da’ ahaan ama maskax ahaan, ujeedku waxaa weeye qof yar iyo qof waalan midna looma galmoon karo. Caasha oo ahayd lix jir maxay ka ogeyd ujeedka Maxamed loo siiyey? Safiya Bintu Xayyi ma raali bay ka ahayd in nebigu u galmoodo kadib markuu xasuuqay ehelkeedi oo dhan? Xaaskaaga uma galmoon kartid haddii aanad raali ahaansho ka haysan, qofta haweenka ahi jidhkeeda iyada oo keliya ayaa leh masuulna ka ah.
Muslim soo qafaashay addoon (ملك اليمين)
Haddaad quraanka ama axaadiista ku aragto ereyada (ملك اليمين) ama (السبايا و الجواري) waxaad ogaata inay yihiin haween addoon ah magacyadaana loogu bixiyey si loogu bannaysto kufsigooda. Diintu waxay bannaysay in haweenayda addoonta ah loo galmoon karo meher la’aan waxbana aan laga waydiinayn jidhkeeda maadama ay tahay hanti ninka kufsanayaa leeyahay, nebiguna waxa uu lahaa addoomo noocan ah. Diinta islaamku waxay banneysay oo xalaalaysay kufsiga balse waxay xarrintay oo ciqaabo adag u dajisay galmada ay wadaagaan laba qof oo raali iskaga ah iyagoo maankooda iyo miyirkooda qabana go’aansaday inay raaxaystaan.
Caasha Duullaan kufsi Safiyah Saxaabo
gaal yahaw ALLAHAAGA USOO NOQO
Adigaa xagjir ah iyo jaahil anigu maanta ayaan ka baxay dhaqan carbeedka iyo cunsuriyadooda
SXB MAHADSANID SI WACAN AYAAD USOO GUDBISEY
Muslimku Quraan kaliya ma ku ekaan karaa?
Qaybta: Quraan, Xadiith
Qur’aanka waxaa lagu sheegaa in uu yahay hadalkii ilaahay oo dhamaystiran, haddana Qur’aanka kaligiis kuma filna in uu cadeeyo dhamaan arimaha la xiriira diinta islaamka iyo nolosha. Quraanka waxa uu u baahanyahay mar walba sunno dhamaystirta wax walba oo uu ka tagay. Tusaale; salaadaha oo ah udub dhexaadka diinta, si toos ah uguma cadda Qur’aanka qaabka loo tukanayo iyo...
W/Q: Khaled Hassan 4th August 2018
Islaamka iyo dhillaysiga